China Hardness Materials High Mills Jet Mill orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Qiangdi
1.Perecision coatings coatings, 100% manafoana ny fandotoana vy amin'ny fizotran'ny fanasokajiana ara-materialy hanomezana toky ny fahadiovan'ny vokatra. Mety indrindra amin'ny filan'ny atiny vy amin'ny akora elektronika, toy ny asidra avo kobalt, asidra manganese lithium, fosfat vy vy, Ternary Material, carbonate lithium ary asidra lithium nickel ary kobalt bateria sns fitaovana cathode bateria.
2. Tsy misy fiakaran'ny maripana: tsy hitombo ny maripana satria potipotika ireo fitaovana ao anatin'ny toe-javatra iasana amin'ny fanitarana pnemika ary ny mari-pana ao amin'ny lavaka fanodinana dia tazonina ho ara-dalàna.
3.Fahombiazana: ampiharina amin'ny fitaovana miaraka amin'ny Mohs Hardness ambanin'ny Kilasy 9. satria ny vokan'ny fikosoham-bary dia tsy misy afa-tsy ny fiatraikany sy ny fifandonana amin'ireo voamaina fa tsy ny fifandonana amin'ny rindrina.
Teo aloha: Fampiasana manokana ny mill Jet-bed am-pandriana amin'ny fitaovana mafy
Manaraka: Fampiasana jet-type Disc-type mill mill QDB-50 QDB-100 QDB-150